နှစ်ပေါင်းအတော်ကြာ အတူလက်တွဲလုပ်ကိုင်လာခဲ့တဲ့ ကြီးသူတွေကို သီတင်းကျွတ်အခါသမယမှာ လိုက်ကန်တော့နေတဲ့ လင်းလင်း - TGI Daily News
နှစ်ပေါင်းအတော်ကြာ အတူလက်တွဲလုပ်ကိုင်လာခဲ့တဲ့ ကြီးသူတွေကို သီတင်းကျွတ်အခါသမယမှာ လိုက်ကန်တော့နေတဲ့ လင်းလင်း
မိတ်ကပ်ဖန်တီးရှင် လင်းလင်းကတော့ ဝါရင့်အနုပညာရှင်ကြီးတွေနဲ့ သိကျွမ်းပြီး မိတ်ကပ်​ခြယ်သပေးရသူဖြစ်လို့ ပရိသတ်တွေနဲ့ တရင်းတနှီးရှိသူပါနော်။ အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ မိတ်ကပ်ဖန်တီးရှင်အဖြစ် ပရိသတ်အခိုင်အမာနဲ့ ရပ်တည်နေသလို သရုပ်ဆောင်လည်းကောင်းတာကြောင့် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေနဲ့ ကြော်ငြာတွေလည်း ရိုက်ကူးနေသူပါ..။လင်းလင်းက ဖော်ရွှေပြီး စကားအပြောအဆို ပြေပြစ်တာဖြစ်လို့ မြင်သူတိုင်းက အချစ်ပိုကြတာပါ။
ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကို အခိုင်အမာရယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့ သူမကတော့ ​ Tiktokလေးတွေကိုလည်း ဆော့ကစားလေ့ရှိပြီး အဆိုပါTiktokလေးတွေဟာ လူကြိုက်များလျက်ရှိပါတယ်။ ယခုလို Covid ကာလမှာတော့ အလုပ်အကိုင်တွေနည်းပါးနေပေမယ့် မင်းသမီးကြီး ထက်ထက်မိုးဦးကို မိတ်ကပ်ခြယ်သပေးရတာကို တွေ့ရပါတယ်။ နှစ်ပေါင်းအတော်ကြာ အနုပညာလောကမှာ အတူတူလက်တွဲလုပ်ကိုင်လာခဲ့တဲ့ ထက်ထက်မိုးဦးကို လင်းလင်းက သီတင်းကျွတ်မှာ လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့အတူ သွားရောက်ကန်တော့ခဲ့ပါသေးတယ်။
ထက်ထက်မိုးဦးအပြင် ဆရာဂျွန်လွင်၊မိတ်ကပ်ခင်စန်းဝင်းနဲ့ အခြားသော ကြီးသူတွေကို ကန်တော့နေတဲ့ ကြည်နူးစရာပုံရိပ်လေးတွေကို လူမှုကွန်ယက်ထက်မှာ လင်းလင်းက တင်ပေးလာတာပါ။ ပုံလေးတွေအပြင် ” သီတင်းကျွတ် မှာ ကျေးဇူးရှင် ဆရာသမားများအား ကာယကံ ဝစီကံ မနောကံ တို့နဲ့ ပြစ်မှားမိသည်ရှိသော ရှိခိုးကန်တော့ပါသည် ” ဆိုတဲ့ စာသားလေးကိုလည်း ရေးသားထားတာဖြစ်လို့ ချစ်ပရိသတ်တွေ ကြည့်ရှုစေနိုင်ရန်အတွက် ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရစေနော်…. ။
Source & Photo credit – Lin Lin
နှဈပေါငျးအတျောကွာ အတူလကျတှဲလုပျကိုငျလာခဲ့တဲ့ ကွီးသူတှကေို သီတငျးကြှတျအခါသမယမှာ လိုကျကနျတော့နတေဲ့ လငျးလငျး
မိတျကပျဖနျတီးရှငျ လငျးလငျးကတော့ ဝါရငျ့အနုပညာရှငျကွီးတှနေဲ့ သိကြှမျးပွီး မိတျကပျ​ခွယျသပေးရသူဖွဈလို့ ပရိသတျတှနေဲ့ တရငျးတနှီးရှိသူပါနျော။ အောငျမွငျကြျောကွားတဲ့ မိတျကပျဖနျတီးရှငျအဖွဈ ပရိသတျအခိုငျအမာနဲ့ ရပျတညျနသေလို သရုပျဆောငျလညျးကောငျးတာကွောငျ့ ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးတှနေဲ့ ကွျောငွာတှလေညျး ရိုကျကူးနသေူပါ..။လငျးလငျးက ဖျောရှပွေီး စကားအပွောအဆို ပွပွေဈတာဖွဈလို့ မွငျသူတိုငျးက အခဈြပိုကွတာပါ။
ပရိသတျတှရေဲ့ ခဈြခငျအားပေးမှုကို အခိုငျအမာရယူထားနိုငျခဲ့တဲ့ သူမကတော့ ​ Tiktokလေးတှကေိုလညျး ဆော့ကစားလရှေိ့ပွီး အဆိုပါTiktokလေးတှဟော လူကွိုကျမြားလကျြရှိပါတယျ။ ယခုလို Covid ကာလမှာတော့ အလုပျအကိုငျတှနေညျးပါးနပေမေယျ့ မငျးသမီးကွီး ထကျထကျမိုးဦးကို မိတျကပျခွယျသပေးရတာကို တှရေ့ပါတယျ။ နှဈပေါငျးအတျောကွာ အနုပညာလောကမှာ အတူတူလကျတှဲလုပျကိုငျလာခဲ့တဲ့ ထကျထကျမိုးဦးကို လငျးလငျးက သီတငျးကြှတျမှာ လကျဆောငျပစ်စညျးတှနေဲ့အတူ သှားရောကျကနျတော့ခဲ့ပါသေးတယျ။
ထကျထကျမိုးဦးအပွငျ ဆရာဂြှနျလှငျ၊မိတျကပျခငျစနျးဝငျးနဲ့ အခွားသော ကွီးသူတှကေို ကနျတော့နတေဲ့ ကွညျနူးစရာပုံရိပျလေးတှကေို လူမှုကှနျယကျထကျမှာ လငျးလငျးက တငျပေးလာတာပါ။ ပုံလေးတှအေပွငျ ” သီတငျးကြှတျ မှာ ကြေးဇူးရှငျ ဆရာသမားမြားအား ကာယကံ ဝစီကံ မနောကံ တို့နဲ့ ပွဈမှားမိသညျရှိသော ရှိခိုးကနျတော့ပါသညျ ” ဆိုတဲ့ စာသားလေးကိုလညျး ရေးသားထားတာဖွဈလို့ ခဈြပရိသတျတှေ ကွညျ့ရှုစနေိုငျရနျအတှကျ ပွနျလညျတငျဆကျပေးလိုကျပါရစနေျော…. ။